Ntuziaka A na Z maka otu esi emegharị ihe niile na NYC - Ulo
The Ultimate A to Z Guide to Recycling everything (Dị ka, Ihe niile) Mgbe ị bi na NYC
Ultimate Z Guide Recycling Everything Like
Anyị niile nwere ike ịme ntakịrị (ma ọ bụ ọtụtụ) karịa iji lekọta gburugburu ebe obibi. Mana ikwesighi ịhapụ grid kpamkpam iji mee ihe dị iche: NYC na-eme nwere mmemme imegharị ihe zuru oke. Nke ahụ kwuru, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị mgbagwoju anya oge ụfọdụ. Ya mere, anyị na-akwatu mmejọ na ajụjụ ndị na-emegharị emegharịkarị-nke mkpụrụedemede, n'ezie.
Njikọ: Otu esi ewepu ihe ichoghi achoghi ịhapụ ulo
Iri abụọ 20
Ihe ndị na-abụkarị ígwè (dị ka toasters) ma ọ bụ ọtụtụ plastik (dị ka ndị na-ehicha ntutu) nwere ike banye na blọgụ gị na-acha anụnụ anụnụ na iko ndị ọzọ, plastik na metal. (Brandsfọdụ ụdị, dị ka Osimiri Hamilton , Na-enye ihe omume ndị na-eweghachi azụ.) Maka ihe ndị dị ka friji na ikuku ntụ — nke nwere Freon— mee ọhụhụ soro Ngalaba Idebe Ihe Asacha ka ewepu ha.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịtụba batrị batrị nwere ụdị ọ bụla. Kama, ịnwere ike ịkpọrọ ha gaa n’ụlọ ahịa ọ bụla na - ere ha (dịka Duane Reade na Depot Home) ma ọ bụ ihe omume NYC mkpofu. Batrị alkaline mgbe niile (dịka, AAs ị na-eji na ntanetị) nwere ike ịga na ahịhịa mgbe niile, mana ọ ka mma ịkpọbata ha.
Imirikiti ndị mmadụ maara na igbe ndị a na-emegharị emegharị nwere ike ịhazigharị, mana ya na akpa agba aja aja, akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ mposi efu na akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ, akwụkwọ mpịachi, igbe akpụkpọ ụkwụ na katọn akwa. A na-anabatakwa igbe Pizza — mana tụfuo mmanụ griiz (ma ọ bụ nke ka mma, mechaa ya).
Na-a Cupụ iko
Yep, na kọfị efu (ma ọ bụ matcha) iko nwere ike ịmegharị, ọ bụrụhaala na ọ bụ plastik (gụnyere ahịhịa) ma ọ bụ akwụkwọ; dị nnọọ ijide n'aka na iji kwesịrị ekwesị biini. Styrofoam ga-aga na ahịhịa, ọ bụ ezie na - ekele, ị hụghị ụbọchị ole a.
PSA: Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịtụba ngwa elektrọnik-dị ka TV, kọmputa, ekwentị, wdg. (Can nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 100.) Kama nke ahụ, nye onyinye ọ bụla nke ka na-arụ ọrụ ma weta ihe ndị ọzọ na saịtị dobe ma ọ bụ SAFE (Solvents, Automotive, Flammables and Electronics) disposal event. Ọ bụrụ na ụlọ gị nwere nkeji iri ma ọ bụ karịa, ị tozuru maka ọrụ nnakọta nke eletrọniki.
Ihe mkpuchi aluminom ahụ nke jiri usoro Seamless gị wee nwee ike ịsacha ma tụba ya na igwe na iko.
Epekele na ite ndị ka na-emebibeghị, yana mkpuchi, nwere ike ịga na bins na-acha anụnụ anụnụ. Ihe ndị ọzọ dị na iko-dị ka enyo ma ọ bụ iko enyo-ọ dị nwute na anaghị emegharị emegharị, yabụ nye onyinye ọ bụla dị mma. Iberibe iko kwesịrị ịbụ akpa abụọ (maka nchekwa) ma tụba ya na ahịhịa.
Ngwaahịa dị ize ndụ
Productsfọdụ ngwaahịa na-ehicha ụlọ, dị ka drain na ụlọ mposi (ihe ọ bụla a kpọrọ Danger-Corrosive), kwesịrị mgbe tụba n’ime ahihia mgbe niile. Otu ihe ahụ na-aga maka ihe ọ bụla nwere ike ire ọkụ, dị ka mmiri ọkụ. Were ha gaa na SAFE mkpofu ihe, ma tụlee ịchọ ihe ndị ọzọ na-ehicha ahịhịa-soda na mmanya na-arụ ọrụ ebube maka olulu mmiri kwụsịrị.
Njikọ: Etu aga-esi kpughee Drain a
N'ihi nkwalite? Ọ bụrụ na ụdị ochie gị ka na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịme ego iji ree ya. I nwekwara ike inye ya ihe dị mma, tụfuo ya nke ọma na ngwa elektrọnik ndị ọzọ ma ọ bụ bugharịa ya apụl . (Ekwentị gam akporo dị ka Samsung na-emekwa ka ọ dị mfe.)
Ugh, nke kacha njọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile (gụnyere katalọgụ) nwere ike tụba n'ime akwụkwọ a gwara agwa (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). Mana ụzọ kacha mma ị ga - akwụ bụ wepu aha na ndenye aha achọghị kpamkpam. (Ọ bụ n'ezie ụzọ dị mfe karịa ka ị chere.)
Ehichapụla kọfị kọfị gị: sachaa ha ma tụba ha na blu na-acha anụnụ anụnụ na plastik ndị ọzọ siri ike. N'aka nke ọzọ, ọtụtụ ndị nrụpụta (dịka Keurig na Nespresso) na-enye mmemme nkwụghachi azụ maka ọfịs.
Ọ bụrụ na ọ bụ kọfị flọrịshịrị kọfị (CFL), o nwere obere mercury na ekwesịrị iji ya gaa ihe omume mkpofu SAFE. Incandescent ma ọ bụ Ikanam bọlbụ nwere ike ịga na ahịhịa, mana gbaa mbọ hụ na ị ga-etinye akpa abụọ maka nchekwa. (Ma maka ihe ndekọ ahụ: Ndị ọkụ ọkụ na gburugburu ebe obibi ga-azọpụta gị ụda na ụgwọ Con Ed gị.)
Tinyere ihe oriri doro anya Diet Coke na ite ahịa chili nke Trader Joe, ị nwere ike imegharị ihe ndị dị ka ite aerosol efu, ihe nkwụnye waya na ite na ite. A na-enwe ike ịmegharị mma, kwenye ya ma ọ bụ na ekwenyeghị, mana ijide ha na kaadiboodu, kechie ha nke ọma ma kpọọ ha Akpachara anya.
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, karama oge ochie nke Essie bụ ihe na-egbu egbu (otu ihe ahụ na-ewepụ polish remover). Ọ bụrụ n’ezie na ị gaghị eji ha, were ha gaa na SAFE mkpofu omume.
Ihe ọ bụla ị na-eme, awụpụla ya na mmiri. Grelọ oriri na ọ ofụ ofụ ụdị nri ọ bụla kwesịrị ị wụsara n'ime akpa ma kpọọ Mmanụ Nri - Ọ bụghị maka imegharị ihe tupu ebugharị gị na ahịhịa.
Akwụkwọ nhicha ahụ
Enweghị ike ịtụba akwa nhicha akwụkwọ na akwụkwọ na kaadiboodu imegharị (mmejọ nkịtị), mana ha nwere ike ịga na compost. Mana ọ ka mma igbochi iji gị eme ihe mgbe ị nwere ike: Jiri akwa nhicha akwa mgbe ị na-ehicha aka gị ma ọ bụ efere, yana sponges mgbe ị na-ehichapụ ihe ndozi (hụ na ị na-ewepụta ha mgbe niile na microwave iji gbuo nje)
Dị ka quart nke mmiri ara ehi. (Anyị maara, ọ bụ ihe na-agbatị.) Ma kaadiboodu kaadiboodu dị ka katọn mmiri ara ehi na igbe ihe ọ juiceụ juiceụ, kpochapụrụ-kwesịrị iji ọla, iko na plastik banye n'ezie, ọ bụghị akwukwo. (Ha nwere akwa pụrụ iche nke mere ha ji chọọ nhazi dị iche.)
Mba, ịnweghị ike imegharị ọgwụ nje ndị ahụ site na Nọvemba gara aga, mana ị kwesịrị ịma otu esi atụfu ha nke ọma. Lusgbapụ ọgwụ ụfọdụ bụ na-emebi mmiri , ya mere kama soro a usoro a kapịrị ọnụ (ọ gụnyere kọfị kọfị ma ọ bụ kitty litter). A ga-etinye ihe na-eme ka ihe dị ka agịga na akpa akara, nke na-egosi 'Home Sharps - ọ bụghị maka imegharị' tupu ị banye na ahịhịa. I nwekwara ike iweta ma ihe omume nchekwa.
Ka ọ dị ugbu a, ịchọghị ka anyị gwa gị na revasable canvas totes bụ enyi gị (na, ị maara, nke ụwa). Ma ọ bụrụ na ị nwere drawer jupụtara na nnyefe na akpa Duane Reade (ịghara ịkọcha plastik na-ehicha, ihe mkpuchi na Ziplocs), ịnwere ike iburu ha gaa ọtụtụ agbụ ndị na-enye akpa (dị ka Target, Rite Aid na ọtụtụ ụlọ ahịa).
Ochie ochie ka nwere ọtụtụ ojiji mgbe ịmechara ya. Enwere ike inye ọtụtụ ihe, akwa na akwa nhicha ahụ nwere ike iji akwa akwa na ebe obibi anụmanụ (aww) yana ọbụlagodi iberibe na akwa. Apartmentlọ ụlọ ọ bụla nwere nkeji iri ma ọ bụ karịa (ma ọ bụ ọfịs ọ bụla) nwere ike ịrịọ maka ọrụ nnakọta n'efu. Na ụdị ụfọdụ - gụnyere & Akụkọ ndị ọzọ , H&M, Emeka —Iweta nzipu-ihe n’ụlọ ahịa nke na-ewelata ego dị ụtọ dị ka ụgwọ ọrụ.
N'ụzọ dị mwute, a naghị emegharị ndị a. Ma itinye ego na a windproof version nke ahụ na-ejide elu pụtara obere ihe efu (na obere mkpasu iwe maka gị). Aka ịkwụsị ịzụrụ $ 5 nche anwụ oge ọ bụla mmiri zoro.
Aka nri n'efu. Nchịkọta nri dị ezigbo mfe: nri nri ọ bụla (gbakwunye okooko osisi na osisi ụlọ) bụ egwuregwu dị mma. Nke ahụ gụnyere ihe dịka nri fọdụrụnụ, kọfị kọfị, akwa bekee na pee banana. Debe ihe niile na a compostable akpa na friza (ọ dịghị esi isi!), Weta ya na saịtị nkwụsị ka Greenmarket mpaghara gị maka nchịkọta. Neighborhoodsfọdụ ógbè enweworị nnata ụgbọ mmiri, na-amalite karịa n'afọ a.
I nwere ike iche na nke a dabara na ngalaba compost (anyị mere), mana ọ dị nwute na ọ gbagwojuru anya. Obere ahihia bu ihe anwuru ala, ma oburu na ibi na Brooklyn ma obu Queens, nnukwu alaka na nku ha kwesiri igafe Ngalaba NYC Parks (n'ihi, ihe niile, ọrịa na-akpata ebe). A na-enye osisi a na-emeso (nke pụtara arịa ụlọ) ma ọ bụrụ na ọ dị n'ọnọdụ dị mma, ma ọ bụghị ya enwere ike ịtọ ya maka nchịkọta ahịhịa.
Ahụghị azịza na ndepụta a? Jiri NYC Department of Sanitation’s kemfe search tool to look up mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla. Anyị na-eme ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ugbua.
Njikọ: Wzọ asaa iji mee ka ụlọ gị nwee mmetụta nke ịhazi ọzọ
ihe a ga-eme na ekeresimesi
ụmụaka na-ehota banyere ụlọ akwụkwọ
n'ihu fringes maka ihu oval
otu esi egbochi ntutu isi ma reghachi ntutu
ụdị ụmụ nwanyị na-akpụ ntutu